Somaliland oo xarig ugu hanjabtay Taliyaha Ciidankeeda ee Gobolka Sool – XAMAR POST
Somaliland oo xarig ugu hanjabtay Taliyaha Ciidankeeda ee Gobolka Sool
Taliyaha Ciidanka Milatariga Somaliland Nuux Ismaaciil Taani ayaa amar ku bixiyay in la xiro Taliyaha Guutada 31aad ee Ciidanka Somaliland.
Taani ayaa amray in Magaalada Hargeysa lagu xiro Ismaaciil Faraax Cawaale (Doolaal) oo ah Taliyaha Ciidanka Somaliland ee Gobolka Sool.
Taliye Taani ayaa waxaa uu sidoo kale xilka qaadis ugu hanjabay Taliye Doolaal, iyada oo uu xoogeystay khilaafka u dhaxeeya labada Nin.
Inkasta oo aan si rasmi ah loo caddeyn haddana waxaa jirta hadal heyn ku saabsan in go’aanka Taliyaha guud ee Milatariga Somaliland uu go’aankan la ogyahay Madaxweynaha Somaliland oo laftiisa Askari hore ah.
Waxaa sidoo akle fashil ku dhamaaday wadahallo u dhaxeeya labada sarkaal oo ay wadeen qaar ka mid ah saraakiisha Ciidanka Somaliland.
khilaaf u dhaxeeya labada Sarkaal ee ka wada tirsan Milatariga Somaliland ayaa la sheegayaa in uu salka ku hayo rabshado ka soo cusboonaaday Gobolka Sool halkaas oo uu ka dagaallamo Sarkaal lagu magacaabo Faysal Falaalug oo habeen hore ciidankiisa ay weerareen Saldhigga Booliska Somaliland ee Magaalada Laasacaanood.
Dhinaca kale Somaliland waxaa uu dagaal uga furanyahay Gobolka Sanaag halkaas oo duleedka Ceynaha ay dhowr todobaad ka hor kula dagaallameen jabhad uu wato Nin lagu magacaabo Korneyl Caarre oo horay uga tirsanaa Milatariga Somaliland hayeeshee markii dambe ka soo horjeestay Somaliland.